नेपाल टेलिकमले कहिले ल्याउला अनलिमिटेड डेटा प्याक ? -
नेपाल टेलिकमले कहिले ल्याउला अनलिमिटेड डेटा प्याक ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय मोबाइल डेटामा थ्रीजीसँगै फोरजीको प्रयोग बढेसँगै प्रयोगकर्ताका अपेक्षा पनि बढ्दै गएका छन् । आफ्ना ग्राहकका लागि सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले बेला बेलामा विभिन्न प्याकेज समेत ल्याइरहेका हुन्छन् । तर अहिलेसम्म नेपालमा अनलिमिटेड डेटाको अभ्यास भने सुरु भएको छैन ।
यसै सन्दर्भमा टेकपानाले शनिबार आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृङ्खलाका क्रममा नेपाल टेलिकमकका उपप्रबन्धक तथा सहप्रवक्ता रञ्जीत लोहियालाई हामीले नेपाल टेलिकमले अनलिमिटेड डेटा प्याक कहिले ल्याउँछ भन्ने प्रश्न गरेका थियौं । उनले उक्त प्रश्नको जवाफमा तत्कालकै अवस्थामा अनलिमिटेड मोबाइल डेटा सुरु गर्न सहज नभएको बताए । वायरलेस सेवामा सबै कुरा खुल्ला छोडेर अनलिमिटेड डेटा दिनसक्ने सम्भावना नै नरहेको उनको भनाई थियो । भारी लागतका कारण तत्काल त्यो असम्भव नरहेको उपप्रबन्धक लोहियाको तर्क छ ।
उनले भने, ‘वायरलेस सेवामा मूल्य निर्धारण गर्ने विभिन्न कारक तत्वहरु छन् । धेरैजसो कन्टेन्ट इन्टरनेसनल छन् । त्यस्ता कन्टेन्टका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले पनि ग्राहकलाई केही भार पर्न जान्छ । सँगसँगै हाम्रो यहाँको स्पेक्ट्रम फी, लाइसेन्स फी अर्बौंमा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस किसिमको चुनौतीका बाबजुत हामीले सेवामूलक कम्पनीको हिसाबले न्यूनतम नाफा लिने गरी नेपालभरका जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं ।’
‘व्यवहारिक रुपमा वायरलेसमा अनलिमिटेड हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले केही कुराहरु लिमिट गरेर अनलिमिटेड प्याक ल्याउन सुरु गरिसकेका छौं । तर २४ सै घण्टा एक महिना अनलिमिटेड दिन सक्ने सम्भावना आजको दिनमा अलकति कमै छ ।’
टेलिकमले निश्चित समय र लक्षित वर्गका लागि अनलिमिटेड प्याक सुरु गरिसकेको जनाएको छ । समयसँगै डेटाको खपत बढ्दै जाँदा अरु लागत घट्दै गएको अवस्थामा आफूहरु २४ सै घण्टा मासिक रुपमा अनलिमिटेड डेटा दिने दिशामा अगाडि बढ्ने लोहियाले बताए ।
सामसङ ग्यालेक्सी एस २१ ओलम्पिक गेम्स एडिसन सार्वजनिक, यस्तो छ मूल्य र फिचर
नेपालमा एक महिनामै थपिए ४ लाख २५ हजार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता
सामसङ ग्यालेक्सी जेड फोल्ड थ्री आउँदो अगस्टमा सार्वजनिक हुने
आईफोन ११ को तुलनामा आईफोन १२ का सक्रिय प्रयोगकर्ता धेरै
Here are some general start-up tips forasuccessful home business.
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, आजको राशिफल २०७८ जेठ २४ गते, सोमवार, ७ जुन २०२१।
सामसङ ग्यालेक्सी एस २१ ओलम्पिक गेम्स एडिसन सार्वजनिक, यस्तो छ मूल्य र…
विहिवार दिउँसो सम्म थप ६९३९ जनामा को’रो’ना संक्रमण पुष्टि